मेरा श्रीमानले नै मेरो प्राइभेट तस्विर खिचेर अरुलाई पठाएर भन्ने गर्थे.. – " कञ्चनजंगा News "
मेरा श्रीमानले नै मेरो प्राइभेट तस्विर खिचेर अरुलाई पठाएर भन्ने गर्थे..
No Comments on मेरा श्रीमानले नै मेरो प्राइभेट तस्विर खिचेर अरुलाई पठाएर भन्ने गर्थे..
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाकी २२ वर्षीया सरिता (परिवर्तित नाम)को सानो परिवार छ। वुवा, आमा, तीन दिदी बहिनी र एक भाइ छन्। सरिता परिवारमा जेठी हुन्। घरका मुखिया वुवाले खाजा पसल चलाएर जसो तसो परिवारको गुजारा चलाउँछन्। पारिवारिक जीवन राम्रै चलेको थियो। सबै खुशी थिए।
सरिताको विवाह भयो। जुन विवाहले उनको जीवन नै ‘यू–टर्न’ मा मोडियो। परिवारसगँ छँदा आमाको काखमा रमाएर हुर्किएकी उनी विवाहको केही समयपछि कहिल्यै मुस्कुराउन सकिनन्। सात जन्म साथ निभाउने कसम खाएका आफ्नैले परदेशमा लगेर उनको शरीर घण्टाका दरले बेच्ने हर प्रयास गरे। यौ’ ‘न ध’न्दाको बजारमा उत्रिन नमानेपछि अमानवीय क्रुरताको सबै पी’डा भोग्नु पर्‍यो उनले। सिमित केही हजार रुपैयाँका लागि मात्र उनको शरीर ‘नि’चोड्न’ परपुरष सामुसम्म उनलाई उभाइयो। परदेशमा लगेर उनको श’रीर ‘नि’चोड्न’ का लागि ग्राहकसम्म पुर्‍याउने अरु कोही नभई उनकै श्रीमान ३२ वर्षीय दुर्गाप्रसाद घिमिरे थिए।
२०७४ साल बैशाखमा सरिता र अर्घाखाँची पढेनीका दुर्गाको विवाह भएको थियो। सानी आमाले घरमा विवाहको प्रस्ताव ल्याएकी थिइन्। परिवार विवाह गराउने पक्षमा थिएन। तर, सानीमा लगायतको जोडबलमा विवाह भएको सरिता बताउँछिन्। कक्षा ११ मा पढ्दै विवाह भएकोले एक वर्ष माइतमै बसेर उनले कक्षा १२ को अध्यापन सकाइन्। पढाई सकाएर घर अर्घाखाँची गइन्। श्रीमान वैदेशिक रोजगारका लागि कतारमा बस्ने गरेको विवाह अघि सुनेकी उनले पछि भारतमा केही काम गर्ने गरेको थाहा पाइन्। श्रीमानले सँगै भारत जान दवाव दिन थाले। उनको जाने इच्छा थिएन। श्रीमान श्रीमती सँगै काम गरे भविष्यका लागि रकम जोहो गर्न सक्ने लगायतका कुरा गरेपछि उनी राजी भइन्। दुवै जना भारतको दिल्ली गए। विवाह अघि कुरा चल्दा ‘केटा’ को चालचलन, व्य’वहार सबै राम्रो रहेको भन्ने सुनेकी उनले दिल्ली पुगेपछि श्रीमानको ‘असली अवतार’ देखिन्।
‘दिल्ली पुगेपछि कोठामा ल्यापटप, अनेकन सिमकार्ड, मोबाइलहरू देखेपछि पहिलो दिन नै म अचम्ममा परें’, सरिताले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘विस्तारै श्रीमानको काम बारे थाहा पाएपछि म डराएँ र घर फर्किन चाहँे।’ दुर्गाले दिल्लीमा ‘से’क्स’ र्‍या’के’ट’ को ध’न्दा चलाउने गरेको उनले थाहा पाएकी थिइन्। उनका अनुसार श्रीमान दुर्गाले मोबाइलमा समाजिक सञ्जाल ‘ह्वाट्स एप’ को ग्रुप बनाएका थिए। जसमा व्यक्तिहरू (ग्राहक) सँग जोडिएका थिए। ग्राहकले ‘स’र्भि’स चा’हियो’ भनेको अवस्थामा उनले अनेकन युवती न’ग्न हुनुका साथै विभिन्न किसिमका तस्विर पठाउने र ‘डिमाण्ड’ अनुसारको ‘क’ल ग’र्ल’ लाई ग्राहक समक्ष पठाउँथे। जसको रकम उनले अनलाइन बैकिङ मार्फत लिन्थे। यसरी दिनमा हजारौँ रुपैयाँ कमाउँथे।
उनले डरलाग्दो व्यापार देखेपछि घर छाडिदिन आग्रह गरिन्। तर श्रीमानले मानेनन्। उनले बुवालाई जानकारी गराए त’नाव लिनुहुन्छ भनेर अवस्थाबारे आफन्तलाई जानकारी गराइन्। आफन्तले उक्त विषयलाई लिएर प्रहरी चौकीमा गएको श्रीमानले थाहा पाएपछि सरितालाई अर्घाखाँची घर लिएर आए। त्यसपछि आफुमाथी क्रु’रता सुरु भएको उनी सम्झिन्छन्। त्यती बेलासम्म उनको एउटा छोरी समेत भइसकेको थियो।
‘घर पुगेपछि परिवारका सबैले या’तना दिन सुरु गरे, जुन भनि साध्य छैन’ उनले भनिन्, ‘सबैले दिल्लीबाट किन आएको ? फेरी दिल्ली जा, जस्ता कुरा गरेर द’वाव दिन थाले। तर, फेरी म जान चाहेको थिइन। बुवा आमालाई भनौ भने उहाँहरूलाई त’नाव हुन्छ भनेर सबै सहेर बसेको थिएँ।’
सरिता सँगै जान तयार नभएपछि श्रीमानले एक वर्षे छोरीलाई लिएर दिल्लीका लागि घरबाट निस्किए। छोरीलाई लिएर निस्किएपछि उनलाई पछ्याएर बाटोमा भेटिन्। त्यसपछि आफु र छोरीलाई बुटवल (तिलोत्तमा) माइत छोड्दिन भनेपछि उनी तयार भए। तर, श्रीमानले झु’क्काएर अर्कै बाटो हँुदै आफुहरूलाई कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकामा पुर्‍याएको उनी बताउँछिन्।
‘नाकामा पुर्‍याएर उनी छोरी लिएर सीमापारी जान थालेपछि आफु बा’ध्य भएर पछि पछि जानु परेको उनले सुनाइन्। दिल्ली पुगेपछि श्रीमानले अन्य युवतीलाई जस्तै आफुलाई यौ’ ‘न व्यापारमा ध’केल्न खोजेको उनले गुनासो गरिन्।
‘श्रीमानले क’ल ग’र्लको रूपमा ग्राहकसगँ कुराकानी गर्न, रकम माग गर्न लगाउने जस्ता कार्य ज’ब’रज’स्ती गराउँथे’, उनी घटना सम्झिदै भन्छिन्, ‘भनेको नमाने नि’र्धा’त कु’ट’पि’ट गर्ने, टा’उको समातेर भईंमा प’छा’र्ने, क’रे’न्ट लगाउने जस्ता या’त’ना दिन्थे।’ घटना सम्झेर उनी धुरुधुरु रुन्छिन्।
एक दिन श्रीमानले फलानो स्थानमा गएर सामान लिएर आउँन भनी झु’क्काएर ‘क’ल ग’र्ल’ को रूपमा ग्राहकको सामू पठाएको उनले बताइन्। ग्राहकसामु पुगेपछि यस्तो अवस्थामा केही युवती क’ण्ड’म छु’ट्यो लिएर आउँछु भनेर भाग्ने गरेको उनले सुनेकी थिइन्। र, त्यही जुक्ति लगाएर आफु त्यस दिन उम्किन सफल भएको र अस्मिता लु’ट्नबाट जोगिएको उनले बताइन्।
ग्राहकबाट उम्किएर कोठामा पुगेपछि श्रीमानले उनलाई ग्राहकसगँ किन नगएको भन्दै नि’र्धा’त कु’ट’पि’ट गरे। उनका अनुसार यही जुक्ति अपनाएर कुनै युवती ग्राहक सामुबाट भा’गेपछि ग्राहकले श्रीमानलाई फोन सम्पर्क गर्थे। त्यसपछि श्रीमानले मलाई फोनमा कुरा गर्न लगाएर थप रकम माग गराउँथे। र, ग्राहकले पुनः रकम पठाएपछि उनले ग्राहकको फोन नम्बरलाई ‘ब्लायक लिस्ट’मा राखेर ठगीधन्दा समेत चलाउँथे।
‘‘डिल’ लगत्तै ग्राहकले रकम भुक्तानी गरिदिन्थे। सोझी युवती परी भने ग्राहकसँगै जान्थे तर यदि बाठो परी भने जुक्ति लगाएर भाग्थे’, उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि ग्राहकको फोन आएपछि एकछिनमा आउँछु भनी भागेको युवतीको रूपमा मैले कुरा गरेर थप रकम माग्नु पथ्र्यो।’
उनले आफुलाई ज’ब’रज’स्ती यसरी केही पटक रकम माग गर्न लगाइएको बताइन्। आफूले चलाएको यौ’न ध’न्दाको बजारमा दुर्गाले सरिताको पनि न’ग्न त’स्वि’रहरू पठाउने गरेका थिए। उनले कम उमेरको युवतीको ‘डि’माण्ड’ भएको अवस्थामा श्रीमानले आफुलाई थाहा नदिई आफ्नो न’ग्न त’स्विर ग्राहकलाई पठाउने गरेको सुनाइन्।
‘भनेको नमाने केही खाना पनि दिन्थेनन्, आफु एक्लै खान्थे, मलाई ५÷१० रुपैयाँको चाउमिन ल्याएर फालिदिन्थे’, आखाँबाट आसुको धारा बगाउँदै उनले पीडा सुनाइन्, ‘असाध्यै भोक लागेपछि त्यही चाउमिन २/३ दिन पछि खान्थें।’
दुर्गा कोठा बाहिर जादाँ भागेर नेपाल जान सक्ने भन्दै सरितालाई कोठामा थुनेर जान्थे। सरितासगँ मोबाइल थिएन। या’तनाको सीमा नाघेपछि कोठामा श्रीमान नभएको बेला झ्यालमा लगाइएको मोटो कागज (गत्ता) मा प्वाल बनाएर छिमेकीलाई बोलाइन्। उनको छिमेकको कोठामा इन्जिनियरिङ पढने छात्राहरू बस्थे। उनीहरू पनि सरितामाथि भइरहेको या’तनाको विषयमा जानकार थिए। उनले आफ्नो बुवालाई समाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सम्पर्क गरेर घटनाबारे सबै जानकारी गराईदिन आग्रह गरिन्।
छात्राले पनि फेसबुकमार्फत सरिताको बुवालाई सम्पर्क गरेर घटनाबारे बेलिविस्तार लगाएर उद्दार गर्न आग्रह गरे। श्रीमानले पानी लिन पठाउने बहानामा पुनः उनलाई ग्राहक समक्ष पठाउन खाजे। उनले नजिकैबाट पानी ल्याउँदा किन यति छिटो पानी ल्याएको भन्दै फेरि या’तना दिएको उनले सुनाइन्। उता दुर्गाले या’तना दिइरहँदा यता छात्राबाट सूचना पाएका उनका बुवाले तत्काल जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको महिला सेललाई घटनाबारे जानकारी गराए।
सरिता भागेर नेपाल जान सक्ने भन्दै दुर्गाले उनको सबै क’पडा समेत च्या’ति’दि’एका थिए। जति या’ताना दिदाँ पनि सरिताको खुट्टा डग्मगाएन। उनी अडिग रहिन्। तर, यौ’न ध’न्दा’को बजारमा उनले आफ्नो अस्मिता लु’ट्न दिइनन्। ‘त्यस दिन दुर्गाले आज तलाई मा’रे’र फालिदिन्छु भन्दै न’ग्न बनाएर म’रणा’श’न्न हुने गरी कु’ट’पि’ट गरे, पे’टमा’थी बसेर गु’प्ता’ङ क्षेत्रमा मु’ड्की’ले प’ट’क प’ट’क हा’ने’, उनले भक्काँनिदै भनिन्, ‘पानीमा चो’भे, क’रे’न्ट स’मेत ल’गाइदिए, त्यसपछि म बे’होस भएँ।’
पेटमाथी बसेर गु’प्ता’ङ क्षेत्रमा मु’ड्कीले प’टक प’टक हा’न्दा उनी चि’च्या’इन्, त’ड्पि’र’हिन्, रोइन्, क’राइन तर श्रीमानको मन पग्लिएन। दया लागेन उनलाई। उल्टै अ’र्ध’चे’त अवस्थामा पी’डा दिएर देहत्यागको ‘स्विकारोक्ति बयान’ का लागि ज’बर’ज”स्ती बोल्न लगाई भीडियो बनाएको र कागजमा सही गराएको अझै झल्झल्ती सम्झना आउँछ सरितालाई।
यता बेलुका चार बजे घटनाबारे जानकारी पाएको प्रहरीले तत्काल दिल्ली स्थित मानव बेचबिखनविरुद्दका क्षेत्रमा काम गर्ने आफन्त नेपाल संस्थालाई घटनाबारे खबर गर्‍यो। जानकारी पाएलग्तै आफन्त नेपालले दिल्ली प्रहरी र दिल्ली महिला आयोगको टोली सहित घटनास्थल पुगेर सोही रात सरिताको मरणाशन्न अवस्थामा उद्दार गर्‍यो। सरितालाई उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना गरियो र श्रीमान दुर्गालाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो।
‘घटनाको जानकारी पाएलगत्तै हामीले आवश्यक समन्वय गरेर दयनिय अवस्थामा तत्काल उनलाई उद्दार गरेका थियौँ’, आफन्त नेपालका भारत प्रमुख उद्दार अधिकृत नविन जोशीले भने, ‘उद्दारका लागि कोठामा पुग्दा अवस्था सामान्य थिएन, करेन्ट लगाइएकोले उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक थियो।’
उनले थपे, ‘क्रुर यातना दिइएकाले उनी बोल्न सकेकी थिइनन्। शरीर कामीरहेको थियो। आखाँबाट निरन्तर आँसु बगिरहेका थिए। एकमद कमजोर भएकी थिइन्। अवस्था नाजुक भएकाले उपचारका लागि उनलाई तत्काल अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।’
‘मेरा लागि नविन दाइ र लक्ष्मी दिदी (उद्दारकर्ता) भगवानको रूपमा त्यहाँ आउनुभयो’, उनी भन्छिन्, ‘उहाँहरू नआएको भए म बाँच्ने थिइन होला।’
उद्दारपछि अहिले उनी आफ्नो घर तिलोत्तमा फर्किएकी छिन्। तर, पी’डा बिर्सिन सकेकी छैनन्। ‘विक्षिप्त भएकी सरितालाई अहिले घटना बिर्साएर उत्प्रेरित गर्न निकै जरुरी छ’, आफन्त नेपाल संस्थाको भैरहवा शाखाकी प्रमुख मेनुका गिरीले भनिन्, ‘हामीले सकेसम्म प्रयास गरिरहेका छौँ।’
सरिता अझै पढ्न चाहन्छिन्। समाजमा केही गरेर देखाउने उनको चाहना छ। तर, घरको कमजोर आर्थिक स्थितीका कारण उनको अध्यापन गर्ने चाहनामा ‘ब्रेक’ लागेको छ। सरिता घर फर्किएपछि श्रीमान दुर्गा भारतको थु’नाबाट छुटेर उनको घर आए। लुकेर घरमा पसेका उनले सरिताको आमाको अनुहारमा वि’ष छ्यापे। अस्पतालमा उपचारपछि उनको अवस्था सामान्य छ। परिवारले गु’हार मागेपछि स्थानीयले दुर्गालाई समाते। त्यसपछि हातमा भएको वि’ष दु’र्गाले पनि मुखमा हाले। स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर उपचारका लागि स्थानीय क्रिमसन अस्पतालमा पुर्‍यायो। उपचारपछि अहिले उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको थुनामा छन्।
श्रीमान दुर्गाविरुद्ध मानव बे’चबि’खन तथा ओसरपसार मुद्दा दायर गरी घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका डिएसपी सत्य नारायण थापाले जानकारी दिए। दुर्गालाई उन्मुक्ति दिलाउन राजनितिक चलखेल भइरहेको परिवारको दावी छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
← कुन हो पारसले चलाउने बाइक, कति पर्ला नेपालमा यसको मूल्य ? → धुमधाम बिबाह गरेका श्रीमानको अर्कै प्रेमिका, बिबाह गरेको २ महिनामै फ’रा’र(भिडियो हेर्नुहोस्)